Ny talantalana tariby misy fitaovana sy singa manokana dia azo baikoina, apetraka amin'ny faritra marindrano, ary ny tohatra azo apetraka amin'ny zoro. Ho an'ny tompona trano DIY dia mora ny mametraka rafitra lalamby mifampitohy amin'ny tokotanin-tsambo na tohatra. Ny tariby dia mandray ny fizotry ny firakotra vovoka mitarika indostrialy, izay fefy tady tariby lavorary ho an'ny tetik'asa anatiny sy ivelany.
Ny tariby tariby dia rafitra multifunctional miaraka amina safidy am-polony maro. Raha eo amoron'ny morontsiraka no misy ny tetikanao dia miangavy anao mba hanafatra ny lalamby vy any ivelany hanoherana ny harafesina. Ny paingotra tariby dia azo apetraka amin'ny faritra maro samihafa, toy ny hazo, fitambarana, beton, sns.
Misy karazany roa ny tsanganana vy tsy misy fangaronay: vy vy 304, vy vy 316.
304 dia mety amin'ny ankamaroan'ny rafitra lalamby. Maharitra izy io ary manana endrika borosy tsara tarehy. 316 no mety indrindra amin'ny tontolon'ny morontsiraka satria ny tariby vita amin'ny vy tsy misy fangarony dia mahazaka taona maro eo amin'ny tokotanin-tsambo rehetra manoloana ny ranomasina.
Ny tariby sy ny singa misy tariby rehetra dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony. Raha mila mora ianao dia afaka manome vy karbonika ihany koa izahay.
Fitaovana fametrahana DIY
Ny rafitray tariby tariby dia mifanaraka amin'ny masontsivana ary mora ny mametraka azy. Mila manamboatra ny visy fotsiny isika. Mahazoa aingam-panahy amin'ny alàlan'ny fitetezana ny sasany amin'ireo tetik'asa tariby tariby ireo, avy eo vakio ny torolalana tsikelikely amin'ny fomba fametrahana tadin-tariby.
Ny vidin'ny rafitry ny tariby ataonao dia ho faritana amin'ny haben'ny velarana ilainao, ary koa ny safidy farany nofidinao.
Aorian'ny fankatoavana ny sarin'ny fivarotana, dia mamokatra any amin'ny orinasa any Foshan, Sina ny rafitry ny tariby misy anao. Izahay dia manana fitaovana fanamboarana hazo, vy ary fitaratra ka afaka manamboatra ny sakan'ny tohatra sy ny arofaninao rehetra izahay.
Ny ifantohan'ny fizotrantsika dia ny fanaovana ny fizotry ny fametrahana ho tsotra araka izay azo atao. Ny faritra vy dia tapaka amin'ny halavany ilainao. Afaka nanao izany marimarina kokoa isika satria mifehy ny fizotran'ny injeniera ho an'ny rafitra iray manontolo, ary mahatonga ny fizotran'ny fametrahana ho asa tsotra.
Raha vantany vao noforonina ny rafitry ny lalamby, halefanay hoso-doko sy fametrahana torolàlana momba ny fametrahana an-tserasera izany. Ny vokatray dia mora fametrahana DIY ary ny ankamaroan'ny tsy mila welding. Ny tetik'asa farany azo vitaina afaka andro vitsivitsy.
Teo aloha: Rafitra fanamoriana vy vy vy ho an'ny lavarangana
Manaraka: Terrace Aluminium Frameless U Channel Base Glass Railing
Stainless vy tariby vy
Railing vita amin'ny vy tsy misy vy
Tohatra fiakarana vy